Shanduro nyowani dzeWOSOS 6.2.6, tvOS 13.4.6 uye HomePod 13.4.6 | Ndinobva mac
Shanduro nyowani dzeWOSOS 6.2.6, tvOS 13.4.6 uye HomePod 13.4.6
Kunge iyo nyowani vhezheni ye macOS Catalina 10.15.5, iyo Cupertino kambani yakavhura mamwe ese matsva mavhezheni eayo akasiyana OS maawa mashoma apfuura: watchOS 6.2.6, tvOS 13.4.6, HomePod 13.4.6, uye iOS 13.4.6. Ino nguva, semushanduro yeMacOS, idzi ndidzo shanduro dzekuvandudza kuchengetedzeka uye ndezvekuti kwete mazuva mazhinji apfuura timu ye "hackers" yakwanisa kuJailbreak iOS zvishandiso, saka izvozvi izvo zvatinazvo chivharo chekuvhara kukanganisa kwakaonekwa neichi midziyo.
Izvi zviri nyore uye zvinobudirira kugadzirisa mukuchengetedza kwehurongwa, hazviwedzere nhau dzakakosha umo vashandisi vanozoona shanduko mukushandisa kwechigadzirwa. Zviripachena kuti aya akakosha ekuchengetedza zvigamba uye saka zvinodikanwa kugadzirisa nekukurumidza sezvazvinogona kudzivirira matambudziko.
Kana iwe uri mushandisi weJailbreak, mune iyi kesi vhezheni itsva yeiyo iPhone kana iPad haisi yako. Idzi shanduro dzinovhara zvakakwana chengetedzo chikanganiso chakaonekwa kuita iyo jb uye ichi ndicho chinhu icho Apple chinowanzoita kana dambudziko rerudzi urwu rukaitika. Kune iyo HomePod, iyo nhau zvakare inoenderana nekuchengetedzeka uye kugadzikana kwesystem, saka zvakakosha kuti iwe uvandudze zvese zvishandiso kana uchikwanisa kudzivirira matambudziko.
Sezvo mune macOS, iyo femu iri kubheja pane iyo otomatiki matsva Mune ino kesi, iwe paunogonesa iyo Apple Watch, ichave iine zvese zvakagadzirira kuvandudzwa kungofanana neiyo iPhone, iPad kana HomePod.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Shanduro nyowani dzeWOSOS 6.2.6, tvOS 13.4.6 uye HomePod 13.4.6
Tim Cook anotaura parufu rwaGeorge Floyd uye anozivisa zvimwe zvipo
MacOS Catalina 10.15.5 Supplemental Dzokorora Yakaburitswa